Single uye Dual pfapfaidzo kamwene - China ZhongPeng Special Ceramics
RBSC (SiSiC) desulphurization mokugezera ndiwo anokosha zvikamu flue gasi desulphurization wemuTesitamende chafariz simba zvinomera boilers makuru. Vari chaizvo kuiswa mune flue gasi desulphurizaiton hurongwa zhinji zvinomera chafariz simba uye boilers makuru.
Single mirayiridzo kamwene
Muzana remakore rechi21 Mazinga nyika yakafara acharwisana kuwedzera zvaidiwa kuti yakachena, rikurumidze kushandiswa.
ZPC boka iri vakazvipira kuita kwedu chikamu kudzivirira zvakatipoteredza. ZPC unyanzvi mu pfapfaidzo kamwene magadzirirwo uye kwesayenzi utsanzi nokuda kusvibiswa kudzora indasitiri. Kuburikidza yakakwirira pfapfaidzo kamwene kunyatsoshanda uye kuvimbika, ezasi chepfu choutsi yedu mhepo uye mvura huri kubudirira. Bete kuti mukuru kamwene mazano inoratidza akaderedza kamwene plugging, nani pfapfaidzo muenzaniso kuparadzirwa, miforo kamwene upenyu, uye ikawanda kuvimbika uye kunyatsoshanda.
Izvi kamwene zvikuru vakarongeka unobereka duku droplet dhayamita panguva kufurirwa yepasisa zvichiguma akaderedza simba zvinodiwa kupomba.
• The broadest nemutsara zononoka mokugezera kusanganisira nani kuzadza nemishonga mazano, vakwanise pamakona, uye zvakawanda Rwako rakakwana.
• A azere siyana tichienzanisa kamwene mazano: tangential Inlet, rinopfungaira dhisiki mokugezera, uye dzinoshandisa mokugezera, uyewo low- uye mukuru-kuerera mhepo atomizing mokugezera kuitira kudzima uye yakaoma kukwesha zvikumbiro.
• risingaenzaniswi kukwanisa kugadzira, kugadzira uye kununura customized mokugezera. Tinoshanda kuti kusangana mirayiro toughest hurumende. Tinogona kusangana chaiwo zvinodiwa zvenyu, kubatsira kuti vabudirire optimum hurongwa unongotaura.
Brief Description pamusoro FGD Scrubber Nzvimbo Dzine
Muchikamu chino scrubber, inopisa flue magasi vari kuderedzwa kupisa vasati vapinda pre-scrubber kana absorb. Izvi zvinodzivirira chero kupisa vasanonoka zvinoriumba ari absorb uye kuderedza Vhoriyamu gasi, nokudaro kuwedzera chokugara nguva iri absorb.
Chikamu ichi chinoshandiswa kubvisa particulates, chlorides, kana zvose kubva flue gasi.
Izvi dzinowanzoona pachena pfapfaidzo shongwe kuti unounza scrubber slurry achariwisira pamwe flue gasi, kubvumira nemakemikari kuti vasunge vari SO 2 kutora nzvimbo sump.
Vamwe shongwe vane chiputiriso chikamu. Muchikamu ichi, kuti slurry yapararira pamusoro nzenza kana muronga chiputiriso kuti kuwedzera pamusoro neVadzidzi flue gasi.
Vamwe shongwe vane Perforated bwendefa pamusoro absorb chikamu. Slurry iri rakachengetedzwa zvakaenzana pasi ndiro ichi, izvo zvose equalizes gasi kuyerera uye hunopa pamusoro nharaunda neVadzidzi gasi.
All akanyorova FGD hurongwa vaunze mumwe chikamu mumate zvikuru yakanaka kuti vakatakudzwa nokuda kwebasa flue gasi kurutivi shongwe mbudo. The mhute eliminator idungwerungwe convoluted Vanes kuti musungo uye dzora kuti mumate, vachibvumira kuti vakadzokera hurongwa. Kuti tirambe yakakwirira droplet nokubviswa kunyatsoshanda, kuti mhute eliminator Vanes inofanira kucheneswa nguva nenguva.
Mukaha cône Tangential rinopfungaira TH Series
• Series rworudyi angled mokugezera kushandisa tangential Inlet kuti pave rinopfungaira
• kuzadza nemishonga: mokugezera havana zvemukati zvikamu
• kuvakwa: chimwe-chidimbu Kudzingwa
• kubatana: flanged kana hadzi, NPT kana BSP shinda
• Aiva kunyange mwaya kuparadzirwa
• mwaya mapatani: mhango cône
• mwaya pamakona: 70 ° kusvika 120 °
• Kuyerera rate: 5 kusvika 1500 gpm (15.3 kusvika 2230 l / Nha)
With chaiwo hukuru kusangana wako chaiwo nokurondedzerwa
Full Cone Spiral kamwene
• The chepakutanga zononoka kamwene
• High buditsa velocity
• High simba kunyatsoshanda
• kuzadza nemishonga: chimwe-chidimbu kuvaka pasina zvemukati zvikamu
• Dzimba: mumwe, vaviri kana-chidimbu matatu Kudzingwa
• kubatana: NPT kana BSP shinda makono maererano mureza, munhukadzi shinda uye flanged kubatana dzinowanikwawo chinokosha kuti
• mwaya muenzaniso: izere uye nemhango cône
• Kuyerera rate: 0,5 kusvika 3320 gpm (2.26 kusvika 10700 l / Nha) yepamusoro aibuda prices iripo
Material: Zvaakazoita waakaita nesilicon Carbide (RBSC)
Previous: Nesilicon carbide kamwene, flanged
Next: kuroora mirayiridzo Desulphurizing kamwene
FGD mwaya Scrubber kamwene
Full Cone mwaya mokugezera
Full Jet mwaya kamwene
Hollow Cone Spiral mwaya kamwene
Hollow Cone mwaya mokugezera
RBSiC Spiral mwaya kamwene
nesilicon Carbide mwaya kamwene
Sillicon Carbide Spiral mwaya kamwene
Solid Cone mwaya kamwene
Spiral Full Cone mwaya kamwene
Spiral Full Cone mwaya mokugezera
mwaya Fan Water Jet kamwene
Vortex nesilicon Carbide mwaya kamwene
Vortex mwaya kamwene
Internal Threaded coupling RBSC pfapfaidzo kamwene
DN40 vortex mhango cône nesilicon carbide kamwene
1.5 padiki mwaya kamwene
vortex mhango Cone kamwene
nesilicon carbide desulfurization kamwene